Ithegi: WordPress | Martech Zone
Eyona nto igqwesileyo ye-WordPress SEO Plugin: I-Rank Math
NgoLwesithathu, Juni 29, 2022 NgoLwesithathu, Juni 29, 2022 Douglas Karr
Isikhundla sePlag SEO Plugin yeWordPress yiplug yokukhangela ye-WordPress engasasebenziyo ebandakanya ii-sitemaps, izityebi ezityebileyo, uhlalutyo lomxholo kunye nokuqondisa kwakhona.
Ukufuduka kweWP: Eyona ndlela ilula yokwahlula indawo enye kude ne-WordPress Multisite
NgoMvulo, Juni 27, 2022 NgoMvulo, Juni 27, 2022 Douglas Karr
Omnye wabathengi bethu ukhule kangangokuba inkampani yabo yahlukana nenkampani yabazali. Umba yayikukuba inkampani yabazali yayilawula zonke ii-subbrands zabo nge-WordPress Multisite. Yintoni i-WordPress Multisite? I-WordPress Multisite yinto entle ekhethekileyo eyakhelwe ngaphakathi kwe-WordPress eyenza ukuba kube lula ukwenza ngokwezifiso kunye neemvume kwinethiwekhi yeesayithi kwindawo enye yedatha kunye nomzekelo wokubamba. Sakha sakha uluhlu lweendawo zokuhlala
Uyizinzisa njani isiFundi sePDF kwisiza sakho seWordPress ngokukhuphela ozikhethelayo
Umkhwa oqhubeka ukhula kunye nabathengi bam kukubeka izixhobo kwiindawo zabo ngaphandle kokunyanzelisa ithemba lokubhalisa ukuzikhuphela. IiPDF ngokukodwa - kubandakanywa amaphepha amhlophe, amaphepha okuthengisa, izifundo, iimeko zokusetyenziswa, izikhokelo, njl njl. Njengomzekelo, amaqabane ethu kunye nethemba bahlala becela ukuba sibathumelele amaphepha okuthengisa ukuze basasaze iminikelo yephakheji esinayo. Umzekelo wamva nje yinkonzo yethu yoPhuculo lwe-Salesforce CRM. Ezinye iisayithi zibonelela ngeePDF ngokukhuphela
I-Jetpack: Indlela yokuRekhoda kunye nokuJonga uKhuseleko oluBanzi kunye nokuLondoloza komsebenzi kwiSayithi lakho le-WordPress
NgoLwesine, uJuni 9, 2022 NgoLwesine, uJuni 9, 2022 Douglas Karr
Kukho iiplagi ezimbalwa zokhuseleko ezikhoyo ukujonga umzekelo wakho we-WordPress. Uninzi lugxile ekuchongeni abasebenzisi abathe bangena kwaye banokuthi benze utshintsho kwindawo yakho enokuthi ibeke umngcipheko wokhuseleko okanye iqwalasele iplagin okanye umxholo onokuyaphula. Ukuba nelog yomsebenzi yindlela efanelekileyo yokulandela le miba kunye notshintsho. Ngelishwa, kukho into enye efanayo kunye noninzi lwabantu besithathu